गोकर्ण रिसोर्टको चार बँुदे निर्णयको पुर्खा त बाह्र बँुदे हो। बाह्र बँुदे सहमतिले जनतालाई उत्साह जगाएको थियो। गोकर्णको चारबुँदे निर्णय नर्सरीको बच्चाले कनीकुथी लेखेजस्तो छ। सत्ता साझेदारी, शान्ति प्रक्रियाका विषयमा वार्ता र छलफल जारी राख्ने भनेको के? यस्तो पनि निर्णय हुन्छ? जे होस् बाह्र बँुदेका सहयात्री दल अहिले गम्भीर अन्तर्द्वन्द्वमा छन्। त्यसमध्येमा पनि तीन दलको झगडाले राजनीतिक अवरोध छ। यो अवरोध हटे तीन दलको सुनाम नत्रभने तीनै दल बदनाम हुँदैछन्।
एनेकपा (माओवादी)लाई ठेगान लगाउने हुती अन्य दलमा देखिएन। माओवादीको छैटौं विस्तारित बैठक यही मंसिर ५ गते देखि सुरु हुँदैछ। सो बैठक 'जनविद्रोहमय' हँुदैछ। तीन नेताका राजनीतिक दस्तावेजमा त्यही उल्लेख छ। होइन, वाह्र वर्षे युद्धमा १५ हजार सहिद बनाएर अझै नपुगेको हो? जीवित जनताभन्दा सहिदको संख्या बढी बनाएर गिनिज बुकमा नाम लेखाउने मन छ कि क्या हो? माओवादीका सबालहरू स्थापित भइरहेकै छन्। सदनको सबैभन्दा ठूलो दलले केलाई युद्ध गर्नु परेको त?
अर्को कोणबाट हेर्दा तेस्रो या अन्तिम धक्काको लागि हुने युद्धमा चाहिँ प्रमुख हतियार जुत्ता पो हुन्छ कि? सोलुमा माओवादी अध्यक्षका शब्दमा 'जनता'ले भारतीय राजदूतलाई जुत्ताले हानेर भारतीय विस्तारवादविरुद्ध जनविद्रोहको सुरुवात गरेका पो हुन् कि? सोलुमा भारतीय राजदूतलाई हानिएको जुत्ता 'मेड इन चाइना' हो कि भन्नेमा भारत बडो सशंकित देखिन्छ छ। टेप प्रकरणमा भनिएअनुसार कृष्णबहादुर महराले मागेको ५० करोड रकम सबै जुत्ता किन्नमा खर्चिए भने जनविद्रोहले नयाँ उचाइ कसरी नलेला र?
माओवादीको चुनवाङ बैठकले 'ढाडमा टेकेर टाउकामा हान्ने फौजी रणनीति' तय गरेको थियो। तर काम गर्दै जाँदा अन्य दलको विशेषगरी गिरिजाबाबुको टाउकैमा टेकेर ढाडमा हान्ने स्थिति भयो। अबको विस्तारित बैठकले चाहिँ 'एमालेको विशेषगरी खनाल-गौतमको टाउकोमा टेकेर सुशील-रामचन्द्रको टाउकामा हान्ने फौजी रणनीति' पारित भए अचम्म मान्नु पर्दैन।
माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालजीको भनाइअनुसार माओवादी अझै 'क्रान्तिको तुफान'भित्रै छ। उपाध्यक्ष भट्टराईले पार्टीमा अराजकता, भ्रष्टाचार रहेको रहस्योद्घाटन गरेका छन्। कुटपिट, चन्दा असुली, अवैध धन्दाजस्ता कार्य पनि क्रान्तिको तुफानभित्रै पर्छ कमरेड?
सहमति भन्ने बित्तिकै उति बेलाको उल्लासको सम्झना हुन्छ। हुन त अहिले पनि नेताहरू सहमतिको विकल्पै छैन भन्छन्। सोह्रौं चरणसम्म प्रम चुनाव तन्किरहेको छ। यस्तै हो भने यो तन्काइ सयौं चरणसम्म पनि पुग्नसक्छ। एमालेले राष्ट्रिय सहमति भनिरहेको छ। सहमति नहुनुको सहायक कारणमा दलभित्रका गुटउपगुट पनि हो। भन्नलाई सबै नेताले आफ्नो दल एक ढिक्का रहेको भन्छन् तर प्रत्येक दलभित्र कम्तीमा तीन ढिक्का देखिन्छन्।उदाहरणका लागि माओवादीमा दाहाल-भट्टराई-वैद्य, एमालेमा खनाल-नेपाल-ओली, कांग्रेसमा सुशील-देउवा-रामचन्द्र। पार्टीको एउटा ढिकाले गरेका कुरा अर्को ढिकालाई ठीक लाग्दैन। कतिसम्म भने दुई जनामात्र सभासद् भएको दल पनि दुई ढिका भएका छन्।
सिनेमामा नायक र खलनायकको पहिचान चरमोत्सर्गमा खुल्छ। नेपाली राजनीतिमा पनि अब त्यो समय आइसकेको छ। संविधान सभाको थप आयु पनि अब आधा मात्रै बाँकी छ। अन्तिम समयमा सबैको सक्कलीरूप चिनिने नै छ। सबै दलका नेताहरू 'हिरो' बन्ने कोसिस गर्नुहोला। नत्र ...।